Sunday March 08, 2020 - 17:46:12 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya howlgal raaf ah oo uu Max'med Bin Salmaan ku sameeyay qaar kamid ah amiirrada dowladda Sacuudiga.
Warbaahinta reergalbeedka gaar ahaan midda Mareykanka ayaa faafisay macluumaadyo dheeraad ah oo ku saabsan xarig uu dhaxal sugaha Sacuudiga kula kacay Afar kamid ah amiirrada ugu awoowdda badan qoyska talada haya.
Wargeyska Washington Post ayaa sheegay in ujeedka laga leeyahay xariggan safmareenka ah uu yahay sidii sare loogu qaadi lahaa awoodda Max'med Bin Salmaan oo ah xaakimka dhabta ah ee wadanka.
Warbixinnda cusub waxay sheegayaan in Bin Salmaan uu u yeeray wasiirka arrimaha gudaha oo kamid ah tiiraraka dowladda uuna ku wargeliyay in uu jeelasha utaxaabayo dhammaan siyaasiyiinta uu ka shakisanyahay.
Max'med Bin Naayif wasiirkiii hore ee arrimaha gudaha kana mid ah amiirrada awoodda ku dhax leh qoyska Aala Sacuud ayaa lagu eedeeyay in uu maleegayay Inqilaab melleteri balse sirdoonka reergalbeedka waxay sheegayaan in ololaha raafka ah looga gol lahaa sidii sare loogu qaadi lahaa awoodda maamul ee Max'med Bin Salmaan.
Wargeyska New York Times ayaa isna daabacay warbixin cusub uu sheegaysa in Salmaan Bin C/Caziiz oo ah boqorka Aala Sacuud uu saxiixay howlgalkii lagu qabqabtay amiirrada, Salmaan oo ah Oday sagaashanka sii dhaafaya ayaa doonaya in wiilkiisu uu majaraha uqabto dowladda Sacuudiga.